ManarakaMapa | NextMapping ™ Infographics
Amin'ny NextMapping™ mino ny fikarohana izahay - mino koa izahay amin'ny fanomezana fikarohana amin'ny endrika lasitra mora ampiasaina.
Ny infographics dia 'dashboards' momba ny lohahevitra amin'ny asa ho avy.
Ahoana ny fomba ahafahan'ny mpitondra mamorona sy mamerina manamboatra ny mpiasa hiatrika ireo filàna vaovao ilaina amin'ny ho avy
Ilaina maika ny olona, ​​mpitarika ary mpiasa hamantatra ireo banga amin'ny fahaiza-manao ary hanangana drafitra ho an'ny 'inona no manaraka' amin'ny fananganana ny fahaiza-manao ilaina hitetezana ny manaraka mahazatra.
Ireo dingana 6 hiatrehana ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fampiakarana dia omena ato amin'ity sary ity.
5 Ny mpiasa mahay dia mila fahombiazana amin'ny fomba mahazatra 'manaraka'
Miaraka amin'ny firongatry ny asa lavitra sy ny modely afidin'ny fiasa any ho any (mitokana / in-office) dia mila mampitombo ny fahaizantsika 'olombelona' isika rehetra.
Ity infographic ity dia manome fahitana sy ny fahaiza-mivoatra ilain'ny mpiasa hahomby amin'ny asa 'manaraka' mahazatra.
Ny asa vaovao & 'Manaraka' Normal
Ny fiainana aorian'ny haino aman-jery sy ny zava-misy iainana dia ho hafa be noho ny tamin'ny toe-javatra nisy. Vonona ve ianao?
Ity infographic ity dia manome statistika sy fitaovana hampitomboana ny fahaizanao mandroso amin'ny asa 'manaraka' mahazatra.
Ahoana ny fanamafisana ny famokarana vokatra raha miasa lavitra
Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny olona miasa lavitra dia ny fomba hijanonana vokatra mahomby.
Manome 8 toro-hevitra momba ny fomba hiantohana ny maha vokatra anao indrindra isan'andro.
Ity infographic ity dia manome statistika sy fitaovana momba ny fampitomboana ny fahombiazanao miasa haingana.
NextMapping™ Ny normal vaventy amin'ny asa
Voaporofo ny valanaretina Coronavirus fa tsy ho lasa mitovy ny asa.
Ny kolontsainan'ny toeram-piasana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia naneho fa ny orinasa AZO hahomby amin'ny mpiasa lavitra. Post pandemety dia tsy ho 'orinasa toy ny mahazatra' fa ho 'normal normal business' izy io.
Midika izany fa ny mpitarika dia tokony ho mora tohina, mangoraka ary vonona ny hanova ireo rafitra efa misy mba hifantohan'ireo olona voalohany.
Ity infographic ity dia manome statistika amin'ny "NextMapping™ Ny asa mahazatra. ”
Fanavaozana: ny paikady lehibe indrindra amin'ny taona 2020 & Beyond
94% amin'ireo ekipa nohadihadiana no nilaza fa ny fanavaozana dia fepetra stratejika ho an'ny 2020 sy mihoatra.
Ny fanavaozana dia ahitana ny famoronana tena misy ary mitaky ny olona sy ny firindrana ara-kolontsaina.
Amin'ity infographic vaovao ity dia fantaro ny fisian'ny fanavaozana ROI sy ny orinasa sasany izay 'mandresy' amin'ny fanavaozana.
Maninona ny horonan-tsary dia 'paikady tsy maintsy atao' ho an'ny ho avin'ny asa
Moa ve ianao sy ny orinasanao manararaotra horonantsary handraisana sy hitahiry ny talentanao ambony indrindra?
Ny fikarohana dia nampiseho fa ny horonan-tsary dia ampiasain'ny 67% mpijery finday ary Millennials ary Gen Z mitady horonantsary mba hahitana bebe kokoa momba ny mety ho mpampiasa.
Mba hahitantsika bebe kokoa momba ny antony maha-paikady ny paikady ho an'ny hoavin'ny asa dia misintona ity infographic vaovao nataon'ny ekipanay ao amin'ny NextMapping.
NextMapping ™ - Miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny ho avin'ny asa
Toko 1-8 Infografika avy amin'ny boky vaovao, NextMapping ™ - Miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny ho avin'ny asa
Famerenana ireo Millennial sy Gen Z's mankany amin'ny toeram-piasana vonona amin'ny ho avy
Ny fifaninanana ho an'ny talenta dia hitohy satria hitombo ny safidy ho an'ny asa mihoatra ny teo aloha.
Mifaninana amin'ny orinasa hafa maneran-tany ny orinasa mba hisarihana sy hitazomana ireo olona manan-talenta. Mba hanampiana ny fanamby dia Millennial sy Gen Z's dia misafidy ny ho lasa mpandraharaha.
Ahoana no ahatongavanao amin'ny alàlan'ny fikaonan'ny Millennial sy Gen Z?
Hamarino ity tranokala ity miaraka amin'ny statistika sy ny fomba fijery momba ny fisaintsainana ho an'ny hoavin'ny asa.
Manaiky ny fanovana nomerika sy ny AI ny mpiasa
Toa ny ankamaroan'ny olona dia maniry fatratra ny fanovana dizitaly bebe kokoa sy ny AI - jereo ny Infographic-tsika mba hahalala bebe kokoa.
8 Hacks mpitarika mba hitarika ekipa lavitra
Amin'ny 2030 50% ny ekipa hiasa lavitra - na ny ekipa misy anao lavitra ankehitriny na tsia dia mila manana paikady manokana ny orinasanao mba hampidirana mpiasa lavitra.
Ny mpiasa lavitra dia maniry ny tombotsoan'ny fiasana miasa lavitra ary te-hahatsapa ho tafiditra ao anatin'ny ekipan'ny mpikambana izy ireo.
Ny mpitarika ny fahaiza-manaon'ny 8 dia mila mamindra ny hoavin'ny asa
Ny hoavin'ny asa dia tsy foto-kevitra, tena izy ary mamorona amin'ny fanapahan-kevitra sy ny hetsika ataontsika ankehitriny.
Ilaina ny fanavaozana ny teknolojia hampitomboana ny vahaolana amin'ny olona ary mila mahay teknolojia daholo isika rehetra hanararaotra mamorona ny ho avy. Na izany aza, ny teknolojia fotsiny dia tsy hamorona ny hoavintsika manatsara, ny vahoaka sy ny fifantohana amin'ny olona aloha no hanova tanteraka ny ho avy.
Zahao ity infographic amin'ny 8 fahaizana maha-olombelona ity izay ilain'ny mpitondra hitety ny ho avin'ny asa.
Ny 10 Top dia manova ny mpitarika rehetra mila manao ho vonona amin'ny ho avy
Efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana ny olona sasany afaka mahazo hevitra sy mamono azy haingana?
Matetika izy io satria io olona io dia namolavola 'leadership leadership' avo lenta - ny fahaizana mampifanaraka, mianatra ary mandray andraikitra haingana.
Zahao ny infographic momba ireo fanovana tokony hataon'ny mpitarika mba tsy ho vonona amin'ny ho avy fa afaka 'mamorona ny ho avy' haingana sy mahomby.
Top 10 Leadership Hacks ho an'ny 2018
Ny ankamaroan'ny fanao amin'ny fitarihana izay nahatonga antsika ho any amin'ny toerana misy antsika ankehitriny dia tsy hitondra antsika any amin'ny toerana tokony ilaintsika ho an'ny Hoavin'ny asa.
Ity Infographic ity dia manome hacks ho an'ny Leadership 2018.
13 Ireo akora mahomby amin'ny fandaminana ho avy amin'ny ho avy
Ireo orinasa manana rafitra manokana na paikady fitarihana dia eo amin'ny lafin'ny fandaminana vonona.
Ny hoavin'ny asa
Download our 'a glance' Fialam-boly ho an'ny asa ho an'ny asa izay manome ny angona farany momba ny hoavin'ny asa ary manome anao lohany amin'ny fomba ahafahanao mamolavola ny paikadinao sy ny fomba entinao amin'ny maha-mpitarika sy ho an'ny orinasanao.
Nizara mpitarika: mpitarika daholo ny rehetra
Download our 'an-tsampanan-tsary' sary nizara momba ny fahaiza-mitarika izay manome vaovao farany momba ny fitarihana nizara ny foto-kevitra dia ho toy ny amin'ny ho avy asa.
Fampivelarana ny mpitarika ho avy
Fantatrao ve fa isan'andro isan'andro amin'ny 19 taona manaraka 10,000 Baby Boomers dia hahatratra 65 ary efa anio Ny millennial dia mandrafitra ny 50% amin'ny mpiasa manerantany?
Ny fahaiza-miaina vaovao dia takiana mba hahatratrarana ny andrasan'ny Millennial sy Gen Z's. Sintomy ity Infographic ity izay misy fampahalalana sarobidy izay hanampy anao hahatakatra ny filan'izy ireo hahafahanao manomana tsara ny fivoarany!
Ny ho avin'ny fandaminana asa
Ny ho avin'ny asa izao dia izao ary Ny fandaminana dia tokony hifantoka amin'ny ho avy mahomby. Ampidino ity infographic manambara ity hahitana hoe aiza ny fifantohanao ... lasa na lasa ho avy!
Ny 5 lesoka amin'ny fiheverana marobe
Ny ho avy lehibe amin'ny fahaiza-miasa dia ny fahitana amin'ny lafiny rehetra. Midika izany fa mahita toe-javatra amin'ny alàlan'ny solomaso an'ny tena / hafa / indostria / mpanjifa / manerantany - ity infographic ity dia manome fahitana amin'ny fomba fananganana fahaiza-manao fomba fijery marobe amin'ny hoavin'ny asa.
Ny orinasa 5 aingam-panahy miaraka amin'ny ho avin'ny mpitondra asa
Ampidino ity ho avy amin'ny infographic asa ho avy izay mizara ohatra ny orinasa samy hafa 5 ary ny fomba ataon'ireo mpitarika ny singa manomana ny ho avy izao sy ny zavatra azontsika ianarana amin'ny fomba fiasa ataon'izy ireo.
Misoratra anarana izao mba hisintona ny whitepaper
Raha ny ho avin'ny asa ny robots - inona no ho an'ny olombelona?